lundi, 27 mai 2019 09:53
Mandoto: 1 850 Ariary no vidin'ny herinaratra iray kWh
Adiny efatra isan'andro no misitraka herinaratra ny mponina eto Mandoto - Vakinankaratra. 1850 Ariary no vidin'ny herinaratra iray kWh amin'izany. Anisan'ny lafo indrindra eto Madagasikara izany vidin-jiro izany, hoy i Vonjy Andriamanga, Minisitry ny Angovo, ny Rano ary ny Ankoranafo nandritra ny fidinany tany an-toerana. "Tsy maintsy sintomina hidina izany vidin-jiro izany ary atao laharam-pahamehana ny herinaratra azo avy amin'ny masoandro", hoy ny minisitra. Misedra olana amin'ny tsy fahampian-drano ihany koa ny mponina noho ny fahasimban'ny fotodrafitra ety an-toerana. Namome toky ny minisitra fa tsy maintsy atao izay hisitrahan'ny Malagasy rehetra rano fisotro madio amin'ny vidiny mirary ary anisan'izany ny mponina eto Mandoto. Marihina fa 370 Ariary ny iray KWh ho an'Antananarivo renivohitra. (Jereo Sary Tohiny)
mardi, 21 mai 2019 09:50
Trafika « bois de rose »: Lasa any Singapour ny minisitra Alexandre Georget
Tantara mitohy ny amin’ireo bolabola andramena 27 740 isa avy aty Madagasikara ka nogiazana tao Singapour tamin’ny 2014. Mpandraharaha teratany sinoa Wong Wee Keong, tompon’ny orinasa Kong Hoo, no voalaza fa tompony, ka nokasaina ho entina any Chine ny entana tamin’io. Nandeha ny raharaham-pitsarana tamin’ny 2015. Nomelohin’ny fitsarana tao Singapour higadra telo vola an-tranomaizina, sazy mihatra i Wong Wee Keong, ary mandoa onitra 500 000 dolara ny tenany, 500 000 dolara ihany koa ny Kong Hoo, orinasany. Tsy nijanona teo ny raharaha fa nampiakatra fitsarana ambony ilay mpandraharaha. Nivoaka ny 8 aprily 2019 indray ny didy, ary dia nafahan’ny Fitsarana madiodio i Wong Wee Keong, ary dia naverina aminy ireo andramena 27 740, mitombam-bidy 50 tapitrisa dolara, rehefa avy manefa ny saram-pitobian’ny entana tao Singapour.
Nisokatra ofisialy androany 18 mey 2019 ny « Fihariana » izay fandaharanasa nasionaly ho an’ny fandraharahana. Misokatra ho an’ny tanora sy ny vehivavy manerana an’i Madagasikara, izay maniry hanangana na hanitatra ny orinasany ka hitondra fampandrosoana ho an’ny firenena ity fandaharanasa « Fihariana » ity. Manana petra-bola 200 miliara Ariary ny fandaharanasa ankehitriny, izay vokatry ny fiaraha-miasa amin’ireo mpiara-miombon’antokoa toy ny SONAPAR sy ny Banky Afrikanina momba ny Fampandrosoana (BAD). Ny BNI sy BOA no banky hiara-hiasa amin’ny fanjakana amin’ny fampindram-bola ireo tetikasa voafantina ka 1 tapitrisa hatramin’ny 200 tapitrisa Ariary no famatsiana ho azon’ireo tetikasa ireo.
samedi, 18 mai 2019 10:07
Nisy, ny 18 mey 2019, ny fidinana ifotony niarahan’ny solontenan'ny Ministeran'ny Angovo, sy ny Rano ary ny Akoranafo niaraka tamin'ny teknisianina avy ao amin'ny Jirama sy ny teknisianina tao amin'ny CGHV (Compagnie Générale d’Hydroélectricité de Volobe), nijerena ny toerana afaka hanorenana ny tohadrano lehibe izay mandrafitra io toby famokarana herinaratra vaovao ao Volobe, faritra Atsinanana. Hamatsy 120 MW, izay afaka hisahana ny filan'ny tambazotran'Antananarivo sy Toamasina ny tobim-pamatsiana herinaratra vaovao izay haorina io. Heverina ho vita amin'ny taona 2023 io foibe famokarana herinaratra ao Volobe io eo ka mponina eo amin'ny 2 tapitrisa eo no hisitraka izany. (Jereo Sary Tohiny)
Niaraka nanao be midina teny amin'ny Zandary androany atoandro ny delegasiona avy amin'ny « Plate Forme » notarihin'ireo avy amin'ny Prefektiora, ny avy amin’ny talem-paritry ny varotra sy avy amin'ny talem-paritry fambolena...natrehin’ny lehiben’ny Faritra SAVA nijery ifotony ireo lavanila milanja 34kg izay saron’ny Zandary tao amin'ny mpikirakira lavanila malaza iray ao Ambalamanasy Fokontany Antanifotsy-II, Sambava. Ny sabotsy 11 mey 2019 no sarona amin'ny fanaovana lavanila mialohan’ny fisokafan'ny taom-piotazana, ity mpikirakira lavanila ity. « Niainga avy amin'ny loharanom-baovao marim-pototra avy amin'ny tsara sitrapo no nahitana izao vokatra izao, » hoy ny Lietnà Randrianirina Tahina, komandin’ny Kaompanian’ny Zandary Sambava.
Nihaona tamin-dRamatoa Lantosoa Rakotomalala, Minisitry ny Indostria, Varotra ary ny Asa tanana teto amin'ny birao fiasany Anosy-Antananarivo, omaly, ireo delegasiona Maorisiana manatanteraka asa eto an-toerana. Fihaonana natao hirosoana amin’ny dingana manaraka amin’ny fanatanterahana ny fametrahana ilay "Faritra indostrialy" ao Moramanga ity. Nanatrika izany ny Birao misahana ny Fampandrosoana ara-Toekarena Madagasikara (EDBM) izay nanao sonia ny fehezan-dalàna mamaritra ny fifanarahana sy fiaraha-miasa ara-toekarena sy ara-teknika eo amin'i Madagasikara sy i Maorisy. (Jereo Sary Tohiny)
Sary: Banky Foiben'i Madagasikara
Tapa-bolana lasa izay, ny 17 aprily 2019, dia 3 993.7 MGA ny 1Euro, raha 3 528.69 MGA (ariary) kosa ny 1$USD. Ny fiandohan'ny volana mey kosa, 02 mey 2019, dia niakatra ny 1Euro, lasa 4 048.27 MGA, ary ny 1$USD tsy maintsy novidiana 3 620.42 MGA. Antsoina hoe mihen-danja ny vola rehefa mila maromaro kokoa hividianana vola vahiny hafa. Mahazo aina kosa ny vola rehefa kelikely mifanantona amin'ilay vola vahiny ny sandany hividianana na hanakalozana aminy. (Sary sy loharano Banky Foiben'i Madagasikara)
jeudi, 02 mai 2019 10:43
Fantatrao ve: Ohatrinona ny Building iray?
Anisan'ny fanao ity karazan-trano ity rehefa misy filana fanorenana trano maro mitambatra ho an'olona maro amin'ny fotoana fohy. Matetika dia atao amin'ny tanàna vaovao na nouvelle ville izy io. Raha ny tsotsotra indrindra dia toy ny boite n'afokasika ny endriny, ary tsy mihoatra ny rihina 4 mba hialana amin'ny fametrahana ascenseur izay lafo vidy, ary mila fikojakojana matetika aorian'ny fahavitan'ny trano. Ny trano iray dia tokony aharitra 30 taona any ny faharetany, izany hoe raha misy famatsiam-bola alaina amin'ny banky izany dia famatsiam-bola tsy maintsy averina 20 taona raha ela indrindra.
Hatokana an’ny fiahiana ara-tsosialy, indrindra ho fanohanana ireo fianakaviana marefo amin’ny alalan’ny « filet de sécurité social » ny 90 tapitrisa dolara, toy ny « Vatsin’Ankohonana » nosantarina tany amin’ny Distrikan’i Betafo – Vakinankaratra tamin’ny 2016. Entina hanatsarana ny fahazoana misitraka ny herinaratra ny 150 tapitrisa dolara ho ana orinasa miisa 10 000, CSB miisa 500 ary malagasy mihoatran’ny 2 000 000 (500 000 avy amin’ny fanitarana ny tambazotra ary 1 500 000 avy amin’ny « kits solaires »). Ho an’ny fandaharanasa ho an’ny fanamarinana fananan-tany ny 52 tapitrisa dolara. Ary hanohanana tetikasa samihafa ny 100 tapitrisa dolara.